Meghan looma oggola inuu xirto qalabka dahabka ah. Sida laga soo xigtay wargeysyada, boqoraddu waxay mamnuucaysaa, waxay ka xanaajisay Harry - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Meghan looma oggola inay xirtaan alwaaxyada taajka ah. Sida laga soo xigtay wargeysyada, boqoraddu way ka mamnuucaysaa, waxay ka careysiisaa Harry
Meghan looma oggola inuu xirto qalabka dahabka ah. Sida laga soo xigtay wargeysyada, boqoraddu way ka mamnuucaysaa, waxay ka careysiisaa Harry
Waxyaabaha ka mid ah haweenka kala duwan ee reerka boqoradda ka soo jeeda kuwo kale, mid ka mid ah ayaa haysan kara tiaras qurux badan. Tikidhada qaaliga ah waxay ku jiraan kharashyo badan iyo dhagaxyo qaali ah oo la xiriira qarnigii XN. Markaan aragno jilaankii aan jeclaa, Meghan Markle, oo noqoshada xayawaanku wuxuu ahaa hal shay, laakiin qaar badan oo naga mid ah ayaa sidoo kale rajeynaya in ay aragto iyada oo xidhan dahabka quruxda badan. Sida cad, ma dhacdo inta badan.
Sawirada Getty / Sawir Labadeed
Kate Middleton waxaa badanaa lagu qurxiyaa jalaska qoyska naqshadayaasha caadiga ah ama taariikhiga ah sida Cartier. Inkastoo Duchess of Sussex weli wado waxyaabo fudud. Fekerkiisu waa mid casri ah, jaanis iyo minimalist. Lauren Teff oo loo yaqaan 'London stylist' ayaa lagu sharaxay Fikraddaada UK in Meghan uu jecel yahay in uu ku taageerayo magac cusub oo aan u adeegsanayno kuwii hore.
Mashruuc ay wadaagaan Meghan, Duchess of Sussex 👑 (@ daily.meghan) on Mar 30, 2019 at 2: 07pm PDT
Majaajiladiisa Majaajiladiisa waxay deyn ahaan u deyn jirtay alaabooyinka quruxda badan ee loo yaqaan 'Royal Diana'. Kate Middleton ayaa yimid xitaa, oo sidoo kale ahaa, oo weli loo ogol yahay in uu sameeyo isla. Meghan Markle, oo dhinaca kale ah, maaha liiska dadka xaqa u leh. Iyadoo lataliyeyaasha boqoradda iyo boqoradda qudhiisu ay si macquul ah u go'aamiyeen. sida laga soo xigtay Sun NewsBoqortooyada ma aha mid si gaar ah u soo jiitay habdhaqanka Duche ee naxdinta leh ee Sussex.
Ku dhaji Rainha Elizabeth II (@rainhadoreinounido) on Apr 3, 2019 at 5: 15pm PDT
Meghan waa laga yaabaa inay tahay haweenayda ugu caansan adduunka, laakiin boqoraddu waxay jeceshahay in ay ilaaliso nidaamka. Ilaha waxay muujiyeen xiisad kale oo udhaxeysa lamaanaha Sussex iyo sharafyada ugu sarreeya qoyska boqortooyada.
Boostada ay wadaagaan Harry Prince iyo Meghan Markle 💖 (@harry_meghan_sussex) on Apr 3, 2019 at 12: 39pm PDT
Jewels Crown-ka ma heli karo Meghan sababtoo ah Duchess of Sussex's faragelinta badan iyo kala duwanaanshaha Buckingham Palace. Sida muuqata, xaaladdani waxay aad uga naxday Prince Harry.
iyada oo loo marayo GIPHY
Waxyeellada shabakadaha bulshada
Taageerayaasha qaar ee royalty ayaa si cad u muujiyay fikradooda, waxay ka soo horjeedaan fikradda ah in Meghan ay xirtaan alaabtan. Waxay sidoo kale ka wada hadleen xaqiiqda ah in darajo kasta ay ka hooseeyso Kate's, sidaas darteed waxa ay samaysaa dareen macquul ah. Qaar kale waxay sameeyeen faallo quruxsan oo ku saabsan.
Marnaba ma xirnayn dahabka dahabka ee PD laakiin waxa ay sheeganeysaa in ay haysato marka ay nuqul ka iibiso ganacsiga. Sidan, waxay joojinaysaa MM inay awoodi karto inay sii wato koobiga dahabiga ah ee ganacsiga iyo ganacsiga - waa inay noqotaa inay ka xanaajiso jimicsiga PW iyo PH si ay u sameeyaan jewiga hooyadood '
- macaan (@sweetpe14687243) April 3, 2019
Waxay marnaba daaqada dahabka ah ee dahabka ah ee Diana ah, laakiin waxay sheegtay inay haysato marka ay duusho dukaamada waawayn. Sidan oo kale, waxay Meghan ka hortagtaa inuu sii wato kobcinta Dumarka Princess Diana - Waa in ay ka careysiisaa Prince William iyo Prince Harry si ay u aragto sheekooyinka "nacaybka" ee maadada hooyada.
ma rabto inay xirtaan iyaga iyo ma ahan Boqortooyada mustaqbalka. Waxay tahay qof kaliya oo guursaday oo fursad u leh inuu boqor noqdo.
- Annie (@Locoas) April 4, 2019
iyadu ma mudan inay xirto, mana ay tahay boqortooyo mustaqbalka ah. Waa qof kaliya oo guursaday amiir aan boqor ahayn.
Waa inaysan xirin dahabka dahabka ah ee Diana sababtoo ah waxaa loo sheegay.
- Posh Manhunt (@PManhunt) April 3, 2019
Waa inaysan xirin dahabka dahabka ah ee Diana sababtoo ah waxaa la waydiiyay inaysan sameynin.
- leagravetherapy (@leagravetherapy) April 4, 2019
Battle of the Tiara
Miyaad u maleyneysaa in Duchess ay tahay, ugu yaraan, inay dahab ka sameyso dahabiga? Ama laga yaabee, in Boqortooyada, oo kaliya darajo darajo ah? La wadaag oo la wadaag fikraddaada.
Cameroon: Guddiga Isku-xirnaanta Biliska ayaa ku celinaya hadafkiisa, dhiirigelinta wada noolaanshaha.
Xvideos.com iyo Xnxx.com waa labada goobood ee ugu badan ee Faransiisku ku soo booqdo adduunka. Halkan waa 20 sare